Nin Ciniin ah ayaa Naag kufsaday!!!. - Latest News Updates
Nin Ciniin ah ayaa Naag Kufsaday, Mid kale oo Ciniin ah ayaa ka kacsaday, adiguna oowlaad ayaad ka sugee!!!!!.
Shir ayaa Maamahaan ka socdo Nairobi, waxaa la yiri: Siyaasiyiin ayaa ka qeyb galay, ma hubtaa in ey siyaasiyiin ahaayeen? Siyaasi macnahiisa ma taqaan? Waxa la yiri: Axsaab mucaarad ah, Beryahaan Xisbiyadii Badankoodo waxa ey noqdeen sida Tabakaayo hal Qof iska furtay, weli ma aragtay Barnaamij ey leeyihiin oo lagu raaco iyaguna ey fulin karaa?.
FG: Arragtidaada xur ayaad u tahay, wixii aan ka khalday iga sax, wixii ka dhimanna ku dar.